Daawo:-Cali Khaliif“ogaadda weli hadda Somaliland kamaanan mid noqone,waxaan rabnaa Somaliland loo dhan yahay,,-Video | | Horufadhi Online
Daawo:-Cali Khaliif“ogaadda weli hadda Somaliland kamaanan mid noqone,waxaan rabnaa Somaliland loo dhan yahay,,-Video
Cali Khaliif Galaydh oo ka hadlayey shirkii Beesha Maxamed Garaad Bahararsame oo maalintii shalay kusoo dhamaaday deegaanka xidh-xidh ayaa ku celceliyey in aysan wali ku biirin Maamulka Somaliland isla markaana ay heshiisyo aan mira dhal ahayn wad galeen.
Mr Galaydh ayaa sheegay in ayaa sheegay in ay arrimaha wax ka qabashada xaaluufka degaanka iyo nabad galyadda ay muhiim tahay in cid lagu tiirsanado isaga oo soo qaatay maahmaahdii ahayd,,Buur ahaw ama buur ku tiirsanow,,oo uu uga jeeday waa in Maamulka Somaliland aan garabka saarnaa.
Short URL: http://horufadhimedia.com/?p=58151
3 Comments for “Daawo:-Cali Khaliif“ogaadda weli hadda Somaliland kamaanan mid noqone,waxaan rabnaa Somaliland loo dhan yahay,,-Video”
March 8, 2018 - 1:19 pm
Asc. Marka hore waxaa soo dhowayn mudan in reer uu ka tashado arrimahooda oo ayna isfaham ka gaadhaan, lkn shirka qodobadiisa madmadow baa ku jidha. Sababtoo ah shirka laguma taageerin baaqii ISIMADA dhaqanka ee ahaa in bisha April shir guud oo aaya katashi Dhulbahante isugu yimaaddo. Taa beddelkeedana shirku waxa uu taageeray ku biiritaanka SNM ee kooxdii Caynaba. Taageerid keliya maahane waxa uu HAFRAY beelaha Dhulbahante oo lagu yiri waxa ay taageersan yihiin isu dhiibidii Cali isu dhiibay SNM.
Waxa kale oo lagu yiri shirku waxa uu taageeray midnimada Dhulbahante taas oo MUNAAFIQNIMO cad ah, waayo haddii aysidaa tahay shirku ma taageereen mashruuca fashilmay ee ina Galayr ee waxa uu taageeri lahaa shirwaynaha guud ee la muddeeyey.
Si kastaba, shirka bisha April la muddeeyey halloo diyaar garoobo haddii Alle idmo. Waa halkaas meesha talada reerku taallaa.
Gunaanadkii, waxa aan baaq nabadeed u dirayaa beelaha isku laayay ag-agaarka Buuhoodle ee aan labadaba ka dhashay. Wbt
March 8, 2018 - 7:10 pm
March 10, 2018 - 7:49 am
Laba horgal oo docka yeedha baad tihiin